के औषधी बिना मुटु रोग | Bhalakushari
हिजो आज मुटु रोग बारे व्यापक चर्चा छ । उच्चरक्तचाप, उच्चरक्त कालेष्टेरोल, यूरिक एसिड, मधूमेह, हृदयघात घर घरको समस्या भैसकेको छ । मुटुका रोगीहरूले अस्पतालहरू खचाखच भरिएका छन् । नयाँ नयाँ नीजि अस्पताल र नसिंङ होमहरू खुलि राखेका छन् । लगानी कर्ताहरू स्वास्थ्य सेवामा प्रशस्त मात्रामा पसा लगाउन इच्छूक देखिन्छन् । किनकी फष्टाई रहेको देखिन्छ, स्वास्थ्य सेवाको ब्यापार । बढी रहेको छ मुटुका रोगीहरूको संख्या÷महंगो छ मुटु रोग उपचार सेवा ।
सन् १९७५ ताका अमेरिकामा मेडिसिनमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीको दिमागमा यस्तो महंगो मुटुरोगलाई कसरी सस्तो तरिकाले उपचार गर्न सकिएला भन्ने कुरा खेल्न थालेछ । त्यस बेला अमेरिका र यूरोपमा मुटुरोगको महामारी थियो । हृदयाघात मृत्यूको प्रमूख कारण बनेको थियो । बाईपास सर्जरी एकमात्र उपचार पद्धतिका रुपमा स्थापित थियो । बाइपास सर्जरी नै नगराईकन हृदयघात सम्बन्धि रोग, मुटुको रक्तनलि साँगुरिने रोगलाई कसरी ठिक पार्न किएता भन्ने चिन्तनको शूरुआत दिने अमेरिकाकी डाक्टर डिन ओर्निशले गरेका हुन् । यि डाक्टरले गहिरो अध्ययन र विभिन्न अनुसन्धानहरूद्वारा मुटुको रोगलाई धेरै हद सम्म उल्टाउन सकिन्छ भन्ने प्रणमाहरू विश्व सामु प्रस्तुत गरिदिए । अमेरिका र यूरोप जस्तो आर्थिक रुपले सम्पन्न ठाउँहरूमा उनको चिन्तन र कार्यले त्यति ठूलो प्रभाव पार्न सकेन् तर नेपाल र भारत जस्तो आर्थिक रुपले पिछडिएको ठाउँमा भने चिन्तनले आज ठूलो प्रभाव पार्दै ल्याएको अनुभव गरिएको छ । हुन पनि हो लाखौ रुपैया खर्च गरि उपचार गर्नु पर्ने रोगलाई पैसा खर्च नगरी खानपानका नियन्त्रण, ब्यायाम, ध्यान, योग, प्राणायाम आदी गरेर पूरै पुल्टाउन सकिन्छ भने त्यसको पछाडी को नलाग्ला ? सबैले खोजेको कुरा हो सस्तो मूल्यमा राम्रो र विश्वासिलो उपचार सेवा । तर के यो साच्चिकै सम्भव होला र ?
स्व. राजा विरेन्द्र लाई हृदयाघात भएपछि डा. मृगेन्द्र राज पाण्डेको प्रयाश मा डा. डिन ओर्निश वि. स. २०५५ सालमा नेपाल आएका थिए । उनले त्यस बेलामा एकदमै मिठो शैलीमा जीवनशैली परिवर्तन, खानपान, ध्यान र योगबाट मुटुरोगलाई उल्टाउन सकिने तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए । एउटा विदेशीले आएर हामीलाई हाम्रो स्वदेशी उपज योग, ध्यान, प्राणायाम, शाकाहार आदीका बारेमा सिकाएर मुटुरोगलाई यिनीहरूको प्रयोगबाट उल्टाउन सकन्छि भनी ठोकूवा गरि दिए । त्यसपछि डा. डिन ओर्निशको बाटोबाट हिड्ने आभियानको भारत र नेपालमा शुरुवात भयो ।
औषधी र चिरफार बिना कुटु रोगलाई उल्टाउन सकिन्छ भन्ने अटल विश्वास लिएर विभिन्न थरीका उपचार प्याकेजका साथ योग पिठहरू, प्राकृतिक चिचित्सा केन्द्रहरू खुल्ने क्रम जारी छ । भारतमा डा. डिन ओर्निशलाई पनि उछिनेर मुटुरोगलाई समाजबाटै समाप्त पर्ने, सबै खाले दिर्घ रोगहरूलाई जरै बाटै उखेलेर निर्मूल पार्ने अभियानमा आज स्वामी रामदेवजी महाराज जोड तोडका साथ लागि पर्नु भएको छ । डा. डिन ओर्निश र स्वामी रामदेवजी महाराजले भने अनुसार गरेमा मुटुरोग उल्टने, नियन्त्रण हुने, जरै देखि उखेलिएर निर्मूल हुने अथवा अन्य के कसो हुने हो त्यो गर्ने ले नै भोग्ला तर मूल कुरो यो हो कि स्वास्थ्यका लागि र मुटु रोगीका लागि फाइदा पक्कै हुन्छ ।
डा. डिन ओर्निशले हामीलाई कुनै नयाँ कुरा शिकाएका छैनन् । उनले हामीले बिर्सेका हाम्रै संस्कृति र परम्पराका राम्रो स्वास्थ्यवर्धक कुराहरूलाई फूलबुट्टा भरेर, ताजा बनाएर हाम्रा सामू मिठो शैलीका राखिदिएका मात्र हुन् । के हुन मुटु रोगलाई उल्टाउन सक्ने शक्ति भएका ती कुराहरू ?
ती शक्तिशाली औषधिहरू हुन् : शाकाहार, चिल्लोमुक्त आहार (जिरो फ्याट डाईट), धूम्रपान त्याग, योगासन, ध्यान, तनाव व्यवस्थापन, सकारात्मक चिन्तन र मायाप्रेम । यि औषधीहरूबारे चर्चा गर्नु भन्दा पहले यो बुझ्नु जरुरी छ कि के यसबाट सबैखाले मुटुका रोगहरू उल्टिन सक्छ ? यो भ्रममा कोही पनि बस्नु हुँदैन कि सबै खाले मुटुका रोगहरू औषधी र चिरफार बिना निर्मूल पार्न सकिन्छ । यदि यो संभव हुँदो हो त आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको कुनै पनि आवश्यकता पर्ने थिएन होला ।
हामीलाई सबै भन्दा बढी चिन्ताको विषय भनेको कोरोनरी मुटुको रोग र हृदयाघात हो किन भने यो प्राणघातक छ, यसको उपचार धेरै महँगो छ र उपचार गर्न चिरफार वा एञ्जियोप्लाष्टी को आवश्यकता पर्दछ । बिना चिरफार यो रोगको उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने बलियो आधार भएको खण्डमा कारोनरी मुटुको रोगबाट पीडित, एञ्जियोप्लाष्टी वा बाइपास सर्जरी द्वाराउपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका धेरै बिरामीहरू यसबाट लाभाञ्वीत हुन सक्ने थिए । के यो संभव होला ?
मुटुमा रक्तसञ्चार गराउने ३ वटा प्रमूख रक्तनलिहरू छन् । यि रक्तनलिहरूको भित्री भागमा चिल्लो पदार्थ
(कोलेस्टेरोल) जम्मा हुन गएको खण्डमा रक्तनली साँगुरीदै जान्छ र कुनै अवस्थामा रक्तनली पूर्ण रुपले बन्द हुन सक्छ । यस्तो भएमा मुटुका मांशपेशीहरूमा रक्त सञ्चारमा कमि आउँछ, मांशपेशीहरू क्रमिक रुपले मर्न थाल्छन् र हार्ट फेल हुन्छ । यो रोगलाई कोरोनरी मुटुको रोग भनिन्छ । रक्तनलि पुरै बन्द भएको खण्डमा हृदयाघात हुन्छ । धेरै साँगुरिएको वा बन्द भएको रक्त नलिलाई एञ्जियोप्लाष्टि वा वाईपास सर्जरीबाट उपचार गर्नुपर्छ । यो आजको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान (एलोप्याथी) ले सिएकाको पाठ हो ।
एलोप्याथीले यो पनि सिकाएको छ कि यो रोग निर्मूल हुँदैन यस कारण खानपानमा नियन्त्रण, व्यायाम, तनाव मुक्ति, धूम्रपान त्याग साथै औषधीहरूको सेवन आदी उपायहरू जीन्दगीभर गर्नु पर्दछ । एलोपेथीमा कोरोनरी मुटुको रोगको उपचारका तिन प्रमुख खम्बाको रुपमा औषधी सेवन, जीवनशैली परिवर्तन, र एञ्जियोप्लाष्टी वा बाइपास सर्जरी लाई लिइएको छ । यि तिनैवटै उपाएहरू अपनाएको खण्डमा मात्र उपचार पूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता एलोप्याथीमा रहेको पाइन्छ । हृदयाघात सम्बन्धि रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधीहरू महंगा छन् किनकी तिनीहरूको आविष्कार र निर्माण कार्यमा धेरै लगानी भएको हुन्छ । एञ्जियोप्लाष्टी र बाईपास सर्जरीलाई लाखौ रुपैया खर्च लाग्छ किनकी यसका लागि चाहिने उपकारणहरूको मूल्य करौडौ रुपैयाँ पर्दछ । सस्तो र पैसै नपर्ने भनेको जीवनशैली परिवर्तन हो ।
कोरोनरी मुटुको रोगको मूख्य कारण भनेको रक्तनलीहरूमा चिल्लो जम्मा हुनु हो । यि चिल्लो पदार्थहरू भनेको कोलेस्टेरोल र ट्राईग्लासेराइड हुन् । भोजनबाट यस्ता चिल्लो पदार्थहरू शरिर भित्र प्रवेश गर्दछन् । घ्यू, तेल, बोसो र गुलियो पदार्थहरूबाट कोलेस्टेरोल र ट्राइग्लाईसरोडको निर्माण हुन्छ । खानामा यस्ता पादर्थहरूको नियन्त्रण गरेमा शरिरमा चिल्लो पदार्थ बढ्न र जम्मा हुन पाउँदैन प्रशस्त शारिरीक व्यायाम गरेको खण्डमा शरिरमा भएको बोसो पग्लिन्छ र रगतमा चिल्लो पदार्थको मात्रा घट्दछ । चूरोट, सूर्ति नखाने, सागपात र फलपूmल धेरै खाने, मानिसक तनाव कम हुने भएमा रक्तनलि भित्र बासो जम्मा भई रक्तनलि साँगुरिदै जाने र बन्द हुने प्रक्रिया कमजोर हुन्छ ।
अब एक पल्ट गहिरिएर विचार गरौ मासू नखाने (शाकाहारी बन्ने), घ्यू, तेल एक थोपा पनि नखाने, खानेकुरा उसिनेको मात्र खाने, चिनी र मिठाई नखाने भएमा रगतमा चिल्लो पदार्थ एकदमै कम हुन पुग्छ । यस माथि व्यायाम, योग र प्रणायाम पनि गरेको खण्डमा रक्तनलिमा पहिले देखि जमेर बसेको चिल्लो पदार्थ पग्लिन थाल्छ र साँगुरिएको रक्तनलि खुल्न थाल्छ । चूरोट सुर्ति नखाने, मानिसक तनाव नहुने । हरियो सागपात र फलफूल धरे खाने गरेमा रक्तनलि एकदम सफा हुन थाल्छ । यहि सिदान्त हो मुटुरोगलाई चिरफार औषधी बिना उल्टाउने भनेको । बोसो भरेर साँगुरिएको मुटुको रक्तनलिलाई शाकाहार, ब्यायाम र तनाव मुक्तिबाट सफा गरि साँगुरोपनालाई घटाउँदै लग्ने उपाय हो यो । छोटकरीमा भन्ने हो भने जीवनशैली परिवर्तनबाट मुटुको रोगको उपचार गर्ने एक सशक्त पद्धति हो यो के साँच्चिकै यो प्रभावकारी छ त ? के जीवनशैली परीवर्तनबाट बन्द भएको मुटुको रक्तनली खुल्न सक्छ ?
मुटुका जन्मजात रोगहरू (प्वाल परेको, मुटुको बनावटमा वित्रृmती भएको, नशाहरू एल्टा भएको आदी) लाई जीवशैली परिवर्तन गरेर उल्टाउन सकिदैन । रामदेवजी महाराजले सिकाउने कपालमाती प्राणायाम र अन्य जुनसुकै योगअभ्यास हजार पल्ट गरे पनि यो संभव छैन । यस्तै बाथ मुटुको रोगबाट विग्रिएका भल्भअरुलाई ठिक पार्न जीवनशैली परिवर्तनबाट संभव छैन । हो कोरोनरी मुटुको रोगीहरूको साँगुरिएको रक्तनली, बढेको रक्तचाप, मधुमेह र कालेस्टेरोललाई जीवनशैली परिवर्तन बाट धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । एकदमै लागेर प्रयाश ग¥यो भने ९०% साँगुरिएको मुटुको रक्तनलीलाई ७०% वा सो भन्दा कम सम्म पनि खुलाउन सकिन्छ । क्याल्शियम जमेर कडा भैसकेको रहेछ भने त्यो नशा खुल्दैन ।
हामीले स्पष्टसँग बुझ्नु पर्दछ कि केही प्रतिशत कोरोनरी मुटुका रोगीहरूलाई औषधी र चिरफार बिना ठीक पार्न सकिन्छ तर यसमा रिस्क प्रशस्त छ । कुनै पनि बेला हृदयाघात हुन सक्ने रिस्क सधै रैरहन्छ । जीवनशैली परिवर्तन गर्दा पनि छाती दुख्ने कम नभएमा, बढेको रक्तचाप नियन्त्रणमा नआएमा, रगतमा कालेस्टेरोल नघटेमा औषधीको सेवन गर्नै पर्छ । औषधीको सृवनबाट पनि हृदयघातको संभावना नघटेमा बाइपास सर्जरी एञ्जियोप्लाष्टीको विकल्प छैन ।
जीन्दगी एक पल्ट मात्र पाइन्छ । यसकारण शुरक्षित र भरपर्दो विकल्प रोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्तमा कोरोनरी मुटुका रोगीहरू जसको मुटुका रक्तनली साँगुरिएका छन् उनीहरू औषधी चिरफार विना रोगलाई उल्टाउन प्रयाश गर्न चाहन्छन् भने जीवनशैली परिवर्तनका निम्न लिखित बूँदाहरूलाई नियमित रुपमा कडाईका साथ लागु गर्नुपर्दछः
१. शाकाहारी बन्ने
२. धुम्रपान नगर्ने
३. शरिरको तौल घटाएर आवश्यक भन्दा केहि कममा राख्ने (दुब्लाउने)
४. दैनिक व्यायाम, ध्यान, योग, प्राणायम गर्ने
५. हरियो सागपात र फलफुल धेरै खाने
६. चिल्लो पदार्थ १ थोपा पनि नखाने
७. मानसिक तनावबाट पूर्ण मूक्र हुने
८. माया प्रेमको भावना बढाउने
९. उच्चरक्तचाप, मधुमेह र उच्चरक्त– कोलेस्टेरोललाई नियन्त्रणमा राख्ने । 
(डा.रेग्मी नेपाल एनसीडी एलायन्सका अध्यक्ष हुन् ।)